‘सिनेमा खेल्ने सपना पूरा गर्दैछु’ - जम्काभेट - साप्ताहिक
‘सिनेमा खेल्ने सपना पूरा गर्दैछु’
चैत्र १२, २०७६
गायक प्रकाश सपूतले चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएका छन् । अहिले छायांकन भइरहेको ‘परदेशी–२’ बाट उनले चलचित्रमा डेब्यु गर्न लागेका हुन् । चलचित्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका सपूतसँग उनको कलायात्राबारे साप्ताहिकका लागि राजाराम पौडेलले गरेको कुराकानी :
कसरी गीत/संगीतबाट एक्कासि चलचित्र क्षेत्रतिर मोडिनुभयो ?
गीत/संगीतलाई छाडेर सिनेमातिर लागेको होइन । मेरो गायनयात्रा पनि जारी नै छ । यद्यपि, सिनेमामा अभिनय गर्ने बाल्यकालदेखिकै चाहना पूरा गर्दैछु । सिनेमाप्रति पहिल्यैदेखि आकर्षण थियो । सानो छँदा अत्यधिक सिनेमा हेर्थें । सिडी किनेर गाउँका सुबेदारको घरमा भएको डेकमा हालेर टिभीमा फिल्म हेरिन्थ्यो । बजार गएका बेला एकैचोटी थुप्रै फिल्मका सिडी ल्याउने गरेको थियो । र, पालैपालो हेर्ने गरेका थियौं । त्यतिबेलैदेखि मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्ने रहर पलाएको हो । अहिले त्यो रहर पूरा हुँदैछ ।
पहिलो पटक हलमा गएर चलचित्र हेरेको अनुभव ?
मैले पहिलोचोटि हलमा गएर हेरेको चलचित्र ‘मायाको जाल’ हो । त्यही दिन अर्को पनि एउटा चलचित्र हेरेको थिएँ, नाम बिर्सिएँ । एलएलसीको परीक्षा चलिरहेको थियो । त्यही बेला शनिबार बाग्लुङ बजार पुगेर साथी सुरेश र मैले पूजा हलमा गएर फिल्म हेरेका थियौं । फिल्म हेरेर फर्कंदा रात परेको थियो । त्यसपछि फिल्मको हिरो बन्ने चाह झन् बढ्यो ।
‘परदेशी–२’ मा कसरी इन्ट्री हुनुभयो ?
मैले पहिल्यै नारायण रायमाझीसँग फिल्ममा अभिनय गर्न रहर भएको कुरा बताएको थिएँ । एक दिन उहाँले चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । रमेश बिजीले लेख्नुभएको फिल्म ‘परदेशी–२’ उहाँले नै निर्देशन गर्ने कुरा भइसकेको रहेछ । पछि उहाँले फिल्मको स्क्रिप्ट नै ‘मलाई सुहाउँदो लेखेको’ भन्नुभयो । मैले अस्वीकार गर्ने कुरै भएन ।
अहिले चलचित्रमा अभिनय गरिरहँदा कस्तो लागेको छ ?
एकदम ‘इन्जोय’ गरिरहेको छु । बाल्यकालदेखिको सपना पूरा हुने भएपछि खुसी नहुने कुरै भएन । व्यावसायिक रूपमा गीत÷संगीतबाट राम्रै भइराखेको थियो । सपना पूरा गर्ने अर्थमा चलचित्रमा रमाइरहेको छु । अहिले सकेसम्म राम्रो अभिनय गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरेको छु ।
चलचत्रिमा लागेर गीत÷संगीतबाट टाढिने त होइन ?
त्यो सम्भवै छैन । गायनयात्रालाई पनि अघि बढाउँछु नै, तर यो चलचित्रको काम सकिएपछि ।
चलचित्रमा केकी अधिकारीसँग काम गर्दै हुनुहन्छ । कस्तो लागेको छ ?
केकीजीसँग काम गर्दा गर्व अनुभूति भएको छ । मैले जीवनमा पहिलोचोटि प्रत्यक्ष देखेकी अभिनेत्री पनि केकी नै हुनुहुन्छ । आफूलाई मन पर्ने र स्थापित अभिनेत्रीसँग काम गर्न पाउँदा निकै खुसी छु । उहाँ निकै मिलनसार हुनुहुँदो रहेछ । अभिनयका लागि उहाँको सहयोग पनि पाइरहेको छु ।
अभिनय सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छैन ?
मैले अभिनयबारे ठूलो कुरा गर्न मिल्दैन । तर, यो ठ्याक्कै सिकेर सिकिने कुरा हो जस्तो लाग्दैन । अभिनय भनेको फिलिङ्सलाई व्यक्त गर्ने कला हो । केही प्राविधिक पाटोबारे सिक्न–बुझ्न पर्ने रहेछ । विगतमा म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेकाले सजिलै भएको छ । तैपनि सिकेकै जस्तो त नसिकेको के हुन्थ्यो ?
‘परदेशी–२’ मा तपाईंको कस्तो खालको भूमिका छ ?
म जस्तो छु, त्यस्तै खालको भूमिका दिनुभएको छ । सबै कुरा नखोलौं, तर मलाई दर्शकले सम्झिरहने क्यारेक्टर दिएजस्तो लाग्छ ।
प्रकाशित :चैत्र १२, २०७६
‘लकडाउन’मा सिनेमा : अभिनेत्री सुुरक्षा पन्तका पाँच सिफारिस
लकडाउनमा सिनेमा: दीपेन्द्र लामाको पाँच सिफारिस
‘लकडाउन’मा सिनेमा : ‘बुलबुल’ निर्देशकका दुई सिफारिस
‘पशुपतिप्रसाद’ निर्देशकको ‘लकडाउन’ अनुभूति : हेर्नै पर्ने चार फिल्म
वैशाख १८ सम्म सिनेमा हल बन्द
सकियो पहिलो कमेडी च्याम्पियन बन्ने बिष्णुको सपना
‘हाम्रो भलिबलको स्तर सुधार भएको छ’ माघ ७, २०७६
‘मिस वल्र्डको अदृष्य ताज जित्न सकें’ माघ ३, २०७६
‘समाचार सुनेपछि शून्य भएँ’ मंसिर १६, २०७६
‘चलचित्र र थिएटर दुस्मन होइनन्’ मंसिर १०, २०७६
नोटको बिटाले मात्र आमाको आँसु पुछिदैन कार्तिक २०, २०७६
नयाँ पुस्तालाई मौलिक मिठाई चखाउन सकेनौं कार्तिक ९, २०७६
छिनमै ताल मिलाउन सक्छु कार्तिक ६, २०७६
सत्र वर्षसम्म गाडी देखेको थिइनँ आश्विन १५, २०७६
चलचित्रको बारेमा सोचेकी छैन आश्विन ६, २०७६
यो उपाधि मजस्ताका लागि ठूलो प्रेरणा हो भाद्र ३१, २०७६